ကံကြမ္မာကျီစားခြင်း — Steemkr
အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါဗျ။ ဒီအပတ်တော့ ကျွန်တော်တို့နယ်ရဲ့ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။တကယ်လို့များ တိုက်ဆိုင်မှုများရှိခဲ့ရင်လဲ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့နယ်မှာ ကိုထွန်းရွှေဆိုတဲ့ ရိုးသားပြီး ရှက်တတ်သော ကြောက်တတ်သော လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့မှာ အပျိုကြီးအစ်မတွေနဲ့ အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ကြပါတယ်ဗျ။ကိုထွန်းရွှေဟာ ပန်းရံအလုပ်နှင့် လက်သမားအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ပါတယ်။အပျိုကြီးအစ်မတွေထဲမှာနေလာရတော့ ကိုထွန်းရွှေဟာ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပေမယ့် အရှက်အကြောက်ကြီးပြီး လူတောသူတောထဲကိုလဲ သွားရမှာအင်မတန်ဝန်လေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မိန်းကလေးတွေက တစ်ခုခုများစလိုက်ရင် အိမ်ထဲကနေမထွက်တော့ပါဘူး။
တစ်ခါကများဆိုရင် ကိုထွန်းရွှေတို့ ပန်းရံသမားတွေရွာတစ်၇ွာကိုဘုရားတံတိုင်းကာဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်ဖို့သွားကြရပါတယ်။မိမိရွာနဲ့ အလှမ်းကွာတာကြောင့် အဲဒီမှာဘဲ ညအိပ်နေပြီး အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ညဖက်ဆိုရင် ကိုထွန်းရွှေဟာ ရှက်တတ်တာကြောင့် အိပ်ပြီဆိုရင် တစ်ခြားသူများနဲ့ဝေးရာမှာအိပ်လေ့ရှိပါတယ်။တစ်ရက်ကျတော့ အဖွဲ့ထဲမှ တစ်ယောက်က ညက ကိုထွန်းရွှေကြီး အိပ်တာ ပုဆိုးကြီးကလည်ပင်းရောက်နေတယ်ဆိုပြီး စလိုက်တာ ချက်ချင်းရှက်သွားပြီး ပြန်မယ်လုပ်နေလို့ အကုန်လုံးက ရှင်းပြပြီး တားလိုက်ရပါတယ်။အလုပ်နားတဲ့တစ်ရက်ကျတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က ပန်းရံအဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီး အလုပ်အခြေအနေမေးနေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော့ ကိုထွန်းရွှေဟာ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေပါတယ်။အကြောင်းမှာ ကိုထွန်းရွှေဟာ လေလည်ချင်တာကို ရှက်တာကြောင့် လေမလည်နိုင်ဘဲ မအီမသာဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ဆရာတော်စကားပြောပြီးလို့ အကုန်လုံး ဆရာတော်ကို ဦးချပြီးပြန်မယ့်အချိန်မှာ ကိုထွန်းရွှေက ဦးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူလေမလည်အောင် ထိုင်တုန်းကဖနောင့်နဲ့ဖိပြီးပိတ်ထားတာကလွတ်သွားပြီး လေလည်လိုက်တဲ့ အသံဟာ အကျယ်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ကိုထွန်းရွှေဟာ ရှက်ရှက်နဲ့ဘဲ ကျောင်းပေါ်ကနေကသုတ်ကယုတ်နဲ့ ဆင်းပြေးသွားပါတော့တယ်။တစ်ခြားလူတွေကလဲ အရင်ရက်တွေကလို ရှက်ရှက်နဲ့အပြင်မထွက်တာဘဲထင်ကြတာပေါ့။ဒါနဲ့ ကိုထွန်းရွှေအစ်မက သွားကြည့်တဲ့အခါ ဆွဲကြိုးချသေဖို့လုပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကျမှဘဲ အားလုံးလဲပြေးလာပြီး ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ ရှက်တဲ့စိတ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့အကြောင်းသိရပါတော့တယ်။ကိုထွန်းရွှေဟာလူပျိုကြီးပီပီ အဲဒီလောက်အထိအရှက်ကြီးသူပါ။အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကိုထွန်းရွှေကို တော်ရုံမစကြတော့ပါဘူး၊မတော်တဆကိုယ်စလို့ သတ်သေသွားရင်အမှုပတ်မှာကြောင့်ပါ။
ကိုထွန်းရွှေဟာ အရှက်ကြီးသလို ကြောက်လဲကြောက်တတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နယ်မှာ ၅ရက်ဈေးရှိတဲ့ သစ်ခေါက်ဆိုတဲ့ရွာကို ကိုယ့်ခြံထွက်ကိုသွားသွားရောင်းကြပါတယ်။ဈေးကိုရောင်းဖို့အတွက် လှည်းနဲ့မနက်၎နာရီလောက်ကတည်းက မောင်းသွားရပါတယ်။အဲဒါမှသာ ဈေးချိန်မီအောင်ရောင်းရတာပါ။ဒါပေမယ့် လှည်းမောင်းသွားတဲ့လမ်းတစ်နေရာကတော့ သရဲခြောက်တယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါမှမကြုံဖူးပါ။ညမှောင်ချိန် လှည်းမောင်းလို့အဲဒီနေရာရောက်ရင် တစ်ယောက်ယောက်ကလှည်းပေါ်ခုန်တက်ပြီး လိုက်လာတတ်တယ်ဆိုပြီး တစ်ယောက်စကားတစ်ယောက်ပြောရင်းသိနေကြပါတယ်။လူတိုင်းလဲ အဲဒီနေရာရောက်ရင်လှည်းကိုမြန်မြန်မောင်းသွားကြတတ်ပါတယ်။တစ်ရက်ကျတော့ ကိုထွန်းရွှေတစ်ယောက် သူတို့ခြံထွက်ခရမ်းသီးတွေကို သွားရောင်းဖို့အတွက် ဈေးကိုမနက်၎နာရီထွက်သွားပါတယ်။အရင်နေ့တွေက သူ့အစ်မတစ်ယောက်ပါပြီး မောင်နှမနှစ်ယောက်သွားရောင်းနေကြပါ။အဲဒီနေ့ကတော့ သူ့အစ်မနေမကောင်းတာနဲ့မလိုက်လာပါဘူး။
အဲဒါနဲ့ ကိုထွန်းရွှေတစ်ယောက်ထဲထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကိုထွန်းရွှေ လှည်းမောင်းလာရင်း သရဲခြောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့နေရာရောက်တော့မယ့်အချိန်မှာ ကိုထွန်းရွှေတစ်ယောက်ကြောက်တာကြောင့် သရဲခြောက်တဲ့အခါကာကွယ်ရအောင်ဆိုပြီး ဓားမကိုကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။လှည်းကိုလည်းဆက်ပြီးမောင်းလာလိုက်ပါတယ်။သရဲခြောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရော “ ၀ုန်း” ဆိုပြီး လှည်းပေါ်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ခုန်တက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ကိုထွန်းရွှေလဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ လက်ထဲကဓားကိုကိုင် မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ခုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဘဲ “အား” ဆိုပြီးလူအော်သံကြားလိုက်ရပါတယ်။ကိုထွန်းရွှေလဲ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မှ တစ်ရွာထဲနေ ကိုမောင်ကျော်ဖြစ်နေပါတယ်။အကြောင်းမှာ ကိုမောင်ကျော်က ကိုထွန်းရွှေတစ်ယောက်ထဲဈေးလာမည်ကိုသိပြီး ကြောက်တတ်တာကြောင့် သရဲခြောက်တဲ့နေရာကနေစောင့်ပြီး လှည်းပေါ်ခုန်တက် သရဲဟန်ဆောင်ပြိးခြောက်တာကို ကိုထွန်းရွှေကတစ်ကယ်သရဲထင်ပြီး ဓားနဲ့ခုတ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ ကြောက်တတ်သော ကိုထွန်းရွှေတစ်ယောက် မတော်တဆဖြစ်ရပ်နှင့်အတူ ထောင်(၇)နှစ်ကျသွားပါတယ်။အကျီစားသန်မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ကိုထွန်းရွှေတစ်ယောက် ဓားစာခံဖြစ်သွားရရှာပါတယ်။ဒါကြောင့် မိမိကတော့ ပျော်စေချင်လို့စပေမယ့်လဲ တစ်ပါးသူအတွက်တော့ ကြီးမားသောဒုက္ခများကြုံရနိုင်ကြောင်း သင်ခန်းစာရစေရန် မျှဝေရေးသားလိုက်ရပါသည်။
Thant Soe Zin(@tharpauk)
myanmar writing shame life
4년 전 by tharpauk53
aungzawhtwe62 · 4년 전
စတဲ့နောက်တဲ့သူကလည်း တော်ရုံလောက်မဟုတ်တော့ နှစ်ဖက်လုံးနစ်နာရတာပေါ့။
ကြောက်အောင်ခြောက်တာကနေ ဘဝရော အသက်ပါရင်းလိုက်ရတာ
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tharpauk from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
yiyiswe47 · 4년 전
minpine47 · 4년 전
Good!I got knowledge
nyonyoshein50 · 4년 전
ရှက်ကြောက်ကြီးလွန်းခြင်းသည် ဆိုးယုတ်မှုကိုသာ ဖြစ်စေတတ်သည်။
eieikhing55 · 4년 전
zarmanizawlinn53 · 4년 전
သူတပါးရဲ့ အားနည်းချက်ကို မဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အပြင် ဒုက္ခပါပေးနေကြသေးတယ်။
တစ်ချို့က ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို သူတစ်ပါးအားနည်းချက်ကို အသုံးချချင်ကြတာ
myothuzar60 · 4년 전
ဟီရိ သြတ္တပ မကောင်းတာကိုလုပ်ရမှာရှက်ခြင်း
nyinyiwin61 · 4년 전
အော် ကြောက်စရာကံတရားပါလားလို့ တခြားရှု့ထောင့်ကနေ မြင်မိပါတယ်။
ကျန်တော်တို့ ကိုမိုးကြီးလည်း ပျောက်နေတာ စစ်ဦး မှထင်တယ် ဟီး 😁😁
jhonnight54 · 4년 전
ရှာတတ်ဖွေတတ်ကြည့်မြင်တတ်ရင် ရေးစရာ အကွက်အကွင်းတွေပေါ့ပါတယ်ဗျာ။